Navoaka indray ny daty namoahana ny OnePlus 7T sy 7T Pro | Androidsis
Ny daty famoahana OnePlus 7T sy 7T Pro dia mandeha indray
OnePlus dia nampiasa, hatramin'ny taranaka fahadimy, ny andian-tsarimihetsika miorina amin'ny modely roa, izay ny finday afovoany sy ny Pro manova azy. Ankoatr'izay, ny orinasa dia nanolotra kinova fahatelo izay mahery vaika kokoa noho ny telefaona Pro tsirairay avy. Izany dia manampy ny litera "T" amin'ireo anarana, ary ohatra mazava amin'izany ny OnePlus 5T OnePlus 6T.
Toy izany koa no hitranga amin'ny sainam-pirenena OnePlus 7 y 7 Pro, na dia tsy marina aza. Ny mpanamboatra sinoa dia hanitatra io fianakaviana finday io atsy ho atsy, saingy tsy voatery hanana maodely iray hafa intsony, fa amin'ny roa kosa. Izany hoe, handray isika a OnePlus 7T sy OnePlus 7T Pro, ary ny datin'ny famotsorana azy ireo dia navoaka indray, amin'ity indray mitoraka ity mba hanamafisana iray izay efa fantatsika ary manambara ny hafa amin'ny tsena samihafa.
Nandritra ny fivoarana vao haingana dia niresaka izahay fa ny OnePlus 7T Pro no hanomboka ny 15 ho an'ny Oktobra, tsy nisy afa-tsy ny firesahana momba an'ity fitaovana ity, avy amin'ny zavatra nianaranao tao amin'ny OnePlus 7T. Na izany aza, ny fampahalalana vaovao, ankoatry ny fanamafisana ireo angon-drakitra ireo, dia manome tsipiriany momba izany ihany koa ity modely farany nomena anarana ity dia avy amin'ny tanan'ny voalohany, ary amin'ny daty mitovy. Manomboka amin'io andro io dia mety ho azo amin'ny tsena manerantany izy io.
26 Septambra India fandefasana
10 Oktobra US / EU Launch
Fivarotana 15 Oktobra https://t.co/yKxDlzI1O3
- Max J. (@Samsung_News_) Aogositra 19, 2019
Saingy miova ny toe-javatra rehefa mankany India sy Eropa / Etazonia isika. Ao amin'ny firenena Aziatika goavambe dia ho tonga aloha izy io, indrindra ny 26 septambra ho avy izao, raha any Etazonia sy ny kaontinanta eropeana ny 10 ho an'ny Oktobra. Ireo firenena sy faritra hafa dia mendrika ny telefaona amin'ny daty voalaza etsy aloha.
Mbola fantatra ihany ny fotoana handraisan'i Shina azy ireo, satria matetika tsy mifangaro amin'ny hafa io tsena io. Angamba ilay OnePlus vaovao koa dia hatao ofisialy any amin'ny 15 Oktobra, saingy mbola zavatra tsy mbola hamafisinay io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny daty famoahana OnePlus 7T sy 7T Pro dia mandeha indray
Ahoana ny fampiasana ny fikarohana amin'ny Google amin'ny Android
Ny Redmi Smart TV dia efa manana daty fampisehoana